सबैले ‘तक्मे बुढा’ भन्छन्, मेरो बुढा कसैले भन्दैन– विल्सनविक्रम राई | Screennepal
सबैले ‘तक्मे बुढा’ भन्छन्, मेरो बुढा कसैले भन्दैन– विल्सनविक्रम राई
२०७१, ३१ भाद्र मंगलवारscreennepalInterview0
सेबारो तक्मे बाजे !
सेबारो है, नानी । अन्त, के जाति विषयमा पो हो, बात मारौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । लु सुरु गरौँ ।
तपाईँ समाजेसवी कि राजनीतिज्ञ ?
मलाई राजनीति होइन, समाजसेवा गर्न मन लाग्छ । लाहुरे मान्छे, राजनीति गर्न आउँदैन । बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ । म स्टे«ट कुरा मात्रै बुझ्छु । राजनीति त टेढो, घुमेको, बटारिएको हुन्छ । मलाई बरु बम पड्क्यो भने रिंगटा लाग्दैन, राजनीतिले घुमाउँछ ।
तक्मे बुढो अलि बढी गफाडी भएन र ?
उहिलेको कुरा सम्झिन मन लाग्छ । सुनिदिने मान्छे भेटेको बेला कुरा त गुटुङटुङ निस्किहाल्छन् । बोल्दा–बोल्दै कहिलेकाहीँ ओभरफ्लो पनि भइदिँदो रैछ । नानीले पनि बुढी भएपछि थाहा पाउनुहुनेछ, आफूले कमाएको इमान, इज्जत र प्रेस्टिजको कुरा कति गर्न मन लाग्छ भनेर । आफ्नो पालाको, त्यसमाथि मैलेजस्तो तक्मा जितेको, एक्लैैले बाघ मारेको, तीन÷चारवटा कुकुरको बंगारा झारेको कुरा त झन् धेरै सुनाउन मन लाग्छ । सबै बुढाखाडालाई यस्तै हुन्छ । अमिताभ बच्चनलाई पो सबैले ‘हजुरको फस्र्ट फिल्म कस्तो भयो ?’ भनेर सोध्छन् । हामीजस्तो तक्मा पाउनेलाई ‘कसरी तक्मा पायो भनेर’ कसले सोध्छ ? त्यसैले अरूलाई जबर्जस्ती बोलाएर भए पनि म आफ्नो कथा सुनाउँछु ।
तपाईं त बुढेसकालमा पनि साह्रै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ । केटीहरू खुब पछि लाग्छन् होला है ?
ए लाखे हौ, ह्यान्डसम छु र म ? तर, केटी त पछि लाग्दैनन् । सबैले तक्मे बुढा, तक्मे बुढा भन्छन् । आफ्नो बुढा चाहिँ कसैले भन्दैनन् । साह्रै दुःख लाग्छ । एक जनाले त ‘मेरो बुढा’ भन्दे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, जो पनि तक्मे बुढा भन्दै, हाँस्दै पो जान्छन् । कहिलेकाहीँ अभर पनि पर्छ । वा, सुरुवालको इजारको पो मिलेको छैन कि, दारी एकातिरमात्रै काटेँ कि भनेर छामछाम–छुमछुम गर्छु । सबै ठीकै हुन्छ । तर, केटीहरू चाहिँ मलाई हेर्दै, हाँस्दै जान्छन् । नाइन्टिन फौन्टिनको मान्छेलाई टु थाउजेन्डका केटीहरूले के मन पराउँथे र ? बुढो रै’छ भन्छन्, नजिकै पर्दैनन् ।
अरूले आफूलाई हेरेर हाँसेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?
उनीहरू मलाई हेरेर हाँस्छन् । म उनीहरूलाई हेरेर हाँस्छु । दुवैतिर बराबर हुन्छ । एकचोटि ताप्लेजुङको कुरा हो, एकजना मान्छे ‘तक्मे बुढा त टीभीको जस्तै, सेम टू सेम रैछ’ भनेर मलाई छुन आयो । त्यतिबेला मलाई यति हास उठ्यो, हाँस्दा–हाँस्दा झन्डै तक्मा खसेको ।
लाहुरमा छँदा कत्तिको लभ गरियो ?
लाहुरमा लडाइँमात्रै गरियो । लभ त यतै छँदा गरेको थिएँ । तर, त्यो बेला अहिलेजस्तो प्रविधि थिएन । भगाइदिनुप¥यो भनेर उनलाई चिठी लेखेर पठा’को थेँ । मैले नीलो गन्जी लाएर आएँ भने तिमी मन्दिरमा आउनू, रातो लाएँ भने खोलाको किनारमा आउनू भनेको थिएँ । तर, नीलो गन्जी लाएर खोलाको किनारमा गएछु म । उनी मन्दिरतिर गइछिन् । म यता कुर्ने, उनी उता कुर्ने । दुवैले एक–अर्कालाई धोका भएको ठानेछौँ । अस्ति २०१२ सालमा पो भेट भयो हाम्रो । उनले बिहे गरिछन् । ‘नाइन्टिन फौन्टिनमा अहिलेको जस्तो प्रविधि भइदिएको भए हाम्रो विछोड हुने थिएन’ भनेको उनी क्वाँक्वाँ रोइन् ।
अहिले त प्रविधिकै जमाना छ । फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ?
नाति केटोले मेरो पनि मुहार–पुस्तक बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु । ‘चिया खानुभयो ? भात खानुभयो ? खाजा खानुभयो ?’ भनेर सोध्छन् जो पनि । कत्ति न उनीहरूले नै पकाएर, पस्केर ठिक्क पार्देको जस्तो ! जतिबेला पनि खाएरै बस्छु त म ?
तपाईंको नाति पनि छ क्यारे, होइन ?
हो त । विल्सनविक्रम हो त्यो लन्ठुको नाम । एसएलसी पनि बिगा¥यो । ‘पढेर खान सकिनस् अब बिहे गरेर खा’ भन्छु । मान्दैन त । मलाई पो बिहे गर भन्छ । मेरो उहिल्यै बिहे भएको कुरा बिर्सिसक्यो नाति केटोले ।
पेन्सन जम्मा गरेर गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ रे नि ?
कहाँ हुनु ? भटभटे त अरूको मागेर गुटुङटुङ चलाउँछु । गाडीको के कुरा भो’ र ? फेरि, पेन्सनजति विल्सनले लान्छ । तक्मे त रित्तै !
Previous Postनिर्णयको सफलता च्यारिटी Next Postहेर्नुहोस् फिल्म ‘आभाष’को गीत